गर या मरको अवस्थामा पाकिस्तान ! | Hamro Khelkud
गर या मरको अवस्थामा पाकिस्तान !
एजेन्सी – एकदिवसिय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा आज न्युजिल्यान्ड र पाकिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो ३:१५ देखी सुरु हुनेछ ।
६ खेलमा ५ मा जित निकालेको न्युजिल्यान्ड आजको खेलमा विजयी भए दुई खेल अगावै सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्ने छ । पाकिस्तान गर वा मरको अवस्थामा छ । पाकिस्तान आजको खेलमा पराजित भए लिगचरणबाट बाहिरिने लगभग पक्का पक्किनै हुने छ । पाकिस्तान ६ खेलमा २ मा जित र ३ मा हारका साथ सातौं स्थानमा छ ।
न्युजिल्यान्डका कप्तान केन विलियमसन उत्कृष्ट लयमा छन् । विलियमसनले दक्षिण अफ्रिका र वेस्ट इन्डिजविरुद्ध लगातार शतक प्रहार गरेका थिए । उत्कृष्ट लयमा रहेका विलियमसनलाई रोक्न पाकिस्तानी बलरलाई कठिन पर्न सक्छ । कोलिन मुनरोको खराब लय भने न्युजिल्यान्डलाई चिन्ताको विषय बनेको छ ।
ओपनर मार्टिन गुप्टिल, कप्तान विलियमसन र रोश टेलर न्युजिल्यान्डका ब्याटिङका मुख्य हतियार हुन् । उत्कृष्ट प्रर्दशन गरि रहेका तीब्र गतिका बलर ल्योकी फग्र्युसन, टेन्ट्र बोल्ट र स्पिनर मिचेल सान्टनार उसका बलिङ हतियार हुन् ।
अघिल्लो खेलमा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध ८९ रन प्रहार गरेका पाकिस्तानका ह्यारिस सोहेल आजको खेलमा पनि नायक बन्न सक्छन् । पाकिस्तानको लागि बाबर आजम,फकार जमान र इमाम उल हक उसका प्रमुख ब्याटिङ हतियार हुन् । कप्तान शरफराज अहमिद र सोएब मालिकको खराब प्रर्दशन भने पाकिस्तानको लागि चिन्ताको विषय हो ।
यता ५ खेलमा १५ विकेट लिई सकेका तीब्र गतिका बलर मोहम्मद आमिर पाकिस्तानका मुख्य हतियार हुन् । त्यस्तै वहाव रियाज,सादव खान पनि राम्रै लयमा छन् । हसन अलीको खराव लय थप चिन्ताको विषय हो । विश्वकपमा पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डबीच ८ खेल भएको छ । जसमा पाकिस्तान ६ खेलमा विजयी हुँदा २ खेलमा पराजित भएको छ ।
यी दुई देशबीच कुल १ सय ६ वान डे खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको छ । पाकिस्तान ५४ खेलमा विजयी हुँदा ४८ खेलमा पराजित हुन पुगेको छ । ४ खेलको नतिजा विहिन छ ।